Unokukhetha njani i-niche efanelekileyo kwi-Amazon kwaye ufumanisa amagama angundoqo angaphangeli apha?
Okokuqala, ndincoma ukuqala indlela yakho yokufumana amagama angundoqo aphandwayo kwi-Amazon enetafile elula eyenziwe, umzekelo, usebenzisa i-Google Spreadsheets. Into enokuthi kuya kufuneka ukuba ufumene ukuba yintoni efunekayo kumzuzwana, ngokuhambelanayo nokuba unokubanika inqanaba eliphezulu leenzuzo. Kwaye ubhetele ukubeka ubuncinane izithuba ezithembisayo. Ngale ndlela, kuya kuba lula kakhulu ukukhawuleza ukuhlukanisa amanqaku abo obuthathaka ekufumaneni, kunye nokubeka ngokucacileyo amacala amanqabileyo ayenziwa yi-niche nganye, ngokuhambelana nokuchazwa kwamagama angundoqo kunye naliphi na amagama athandwayo aphezulu asebenzayo kumashishini okanye candelo lomkhiqizo.
Ngoko ke, xa udale uluhlu oluphambili lokutshekisha, lixesha lokudibanisa yonke into enokubambisana ngokubhekiselele kwii-keyword ze-niche ze-Amazon. Kwaye kuyimfuneko ukufihla zonke iiparameters eziphambili kunye namanani ewebhu jikelele kwizinto eziza kuzigcina. Nantsi indlela ephakanyisiwe kakhulu yokugcwalisa uluhlu lwakho lokukhangela kwi-Google Spreadsheets - qi niseka ukuba zonke izinto zenzeke kule ilandelayo:
1. I-Niche - kufuneka ibe yikholamu yokuqala yakho yophando ukuqala. Qhubeka nje ngokucoca yonke into eyahlukileyo ngokungafaniyo ukuba ikholomu yangoku izaliswe ngabadlali abaza kuhlala unokulindela ukuba ube yinqununu yakho yokugqibela kwi-niche efanelekileyo e-Amazon enezona zinto eziphambili ezikhethiweyo ezichaphazelekayo kwicandelo.
2. Umlinganiselo we-Volume Search - apha uphakanyiswa ukuba ubhale phantsi zonke ixabiso lexabiso lomthamo owenziwe ngokulinganayo. Ngokungagqibekanga, ezi xabiso eziqhelekileyo ziya kuboniswa nge-KWFinder ithuluzi.
3. I-Common Range ye-Volume Volume - eli kholweyo lithetha ukubonisa iindalo eziphambili zendlela yokucinga kunye neendlela zayo zokuziphatha ngokubanzi malunga nokutshintsha okusebenzayo (ukusuka kwifom ephantsi ukuya kwizinga eliphezulu utshintsho). Iqhinga: ungcono ukuba le nxalenye yedatha ihlukaniswe ngamaxesha amanyathelo onke ngenyanga.
4. I-Keyword Competitiveness - yindawo leyo apho uhloselwe ukubeka uvavanyo oluthile lwegama elingundoqo. khangela uphendlo lwamagama akwi-niche. Ukuba usebenzisa i-KWFinder, uya kuxhaswa ngamanani amaninzi okukhuphisana. Ndiyathetha ukuba ngesizathu esithile bayithiwa yi-SEO Competition Rank.
5. I-DA ephakamileyo - sebenzisa i-KWFinder ithuluzi okanye i-SERPchecker ukuchaza ukuba mangaphi amaninzi okanye amaphepha ewebhu aboniswe kwiziphumo eziphambili ze-Google zophando zifumene isiqendu se-Domain Authority esiza ngaphezu kwama-40 pts.
6. I-PA ePhakamileyo, i-CF, i-TF - malunga nokucacisa kwaye kufana nekholam yangaphambili, amacandelo amathathu alandelayo kufuneka abonise indawo efanayo / iphepha lephepha eliphezulu (PA), iMicrosoft Flow (CF), kunye ne-Trust Flow (TF) nganye.
7. I-Minimum Learning Outential - ikholomu yokugqibela nebonakalayo ebalulekileyo ibhekiselwe ekugqibiseni ukungafani okuphambili kunye neziphumo zakho ezigqwesileyo kwizinto eziphambili ezicatshulwa ngee-niches eziphakanyisiweyo eziphezulu. Kule kubalo (ewe, kunokubonakala ngathi yinto ekhohlisayo) Ndincoma ukusebenzisa i-AmaProfits dot com okanye nayiphi na inkonzo enje ye-inthanethi-kwaye uyenziwe.